Taariikhda My Butros » Taariikhda Safety shukaansi My Butros
Taariikhda Safety shukaansi My Butros
Last updated: Jan. 13 2021 | 3 min akhri
Online shukaansi Talooyin Advice Safety
shukaansi Online noqon kartaa waayo-aragnimo ka ammaan badan shukaansi dhaqanka. Waxay kuu siinayaa baaxadda ballaaran ee doorashada oo aad sii joogi kartaa meel fog ka ilaa aad diyaar u tahay inay la kulmaan waa.
Haddii aad marna waxaa isku dayay hor ama haddii aad ka welwelsan by sheekooyinka kasta oo aad laga yaabaa maqlay, halkan waa tabo dhowr ah si ay kuu shukaansi online si nabad ah:
Aamin ujeeSameeoyinkaaga. Haddii wax ma dareemaan aan xaq u, Maxaad fursad. durgay dhaafa, haddii this uma shaqeeyo, kaliya durgay.
waxaa dhab Hayso. Noqo sida daacad ah sida aad karaa marka la abuurayo aad profile, ma aad rabto in la dhumiyo si aadan cidna ma aha mid dhumiya. Waxa kale oo ay aad u adag tahay in la iska aad tahay 6'2″ marka aad dhab ahaantii waa 5'6″!
Post a photo, laakiin hubi in aad garan karaa qoyskaaga, asxaabta, guriga ama gaariga ku sugan.
Ka dhig in ay gacanta ku. Ha quusan wixii macluumaad shakhsi aad ugu dhakhsaha badan ama macluumaad shakhsiyeed oo aan post og cidda aad u siinaya in ay.
Ilaali aqoonsiga. Isticmaal site oo kale leh in loogu Bishaareeyey, cinwaanka emailkaaga iyo macluumaadka aad xiriir.
Iska ilaali hadal mid ka mid ah dhaqaalaha aad u fudud. Ma jirto sabab sababta waa in aad abid siidayn macluumaad kasta oo dhaqaale online.
Ha la dagay by codsiyada gargaar dhaqaale, haddii qof aad weydiin lacag xataa haddii aad u dhisay ilaa fahankii a aaminaad iyaga la, ay hubaal tahay scammer a.
Ha la cadaadiyo lagu siiyo macluumaad kasta ama sawiro in aadan rabin in gaar ahaan galay kulan ka hor inta aadan diyaar u yihiin.
Haddii aad tahay qof hubin, weydiisato sawir dhawaan qofka aad la hadlayso.
Ka fikir waxa aad ku qor aad profile iyo markii sheekaynta. Ma gaadhsiin midab midigta iyo ujeedka?
Iska ilaali qof kasta oo leeyahay jacaylka ay undying idiin, gaar ahaan haddii aad marna ka hor yimid.
Marka aad diyaar u yihiin inay la kulmaan, hubi naga talo-qof ammaanka shukaansi hoose
In-Qofka Shukaansi Advice Safety
Shukaansi adeegga internetka sida kuweenna waa waayo-aragnimo ammaan ah laakiin la soo wariyay in of farax waa mararka qaarkood ay fududahay in la illoobin in aad sii haysatid jidkii in.
Waxaad u malaynaysaa in aad ku kulmay taariikhda online of riyooyinkiinna aad ama laga yaabaa in aad tahay oo kaliya cajiib ah laakiin aad ku heshiiyeen in ay la kulmaan. Waxaad laga yaabaa in dater rug cadaa ah ama waxaa laga yaabaa in ay ku soo laabtay ka dib markii shukaansi xiriir ayaa soo afjaray, laakiin halkan waa qaar ka mid ah erayada deg deg ah talo kulan ilaa:
Ha is riixayaa taariikhda iyo xaqiiqada ah ma siin aad faahfaahinta xiriirka shakhsiga ah haddii aad tahay raaxo ah inay sidaa sameeyaan. Marna ha bixin cinwaanka guriga ama xafiiska haddii aad tahay gebi ahaanba kalsooni ku qaba in aad ogtahay iyo aamini karaan taariikhda.
Iska ilaali qof kasta oo ka hadlayaa ku saabsan galmada ama dhaqaalaha ka hor ayaa xitaa waxaad iyaga ku kulmay. Iska ilaali qof kasta oo leeyahay jacaylka undying idiin aad u fudud.
Marka aad la kulanto kuwa taariikhaha ugu horeeya, doorato meel dhexdhexaad ah dadweynaha in si fudud loo heli waa inaad labada iyo waa masaafad view iyo dhagaysiga dadka kale.
U sheeg qof aad ku kalsoon tahay qofka aad la kulmeysa, halka aad u socoto iyo waqtiga aad qorsheyneyso in ay jiri. Haddii qorshe wax iska beddelayaan ha iloobin in ay bixiyaan update ah.
Diyaarso qof si 'aad u hubiso in’ dura joogto ah oo ay leeyihiin hab suntan ah u sheegaya sida ay u socdaan, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay caawimaad.
Aamin ujeeSameeoyinkaaga, haddii aad u malaynayso in wax khaldan yihiin, waa inaad edeb leh ku marmarsiiyoodaan ah iyo ka tago.
Marna ha ku tiirsan yihiin taariikhda gaadiidka ama ka goob lagu kulmo oo aad, gaar ahaan qorsheeyo gurigaaga safarka ay dhacdo in aad u baahan tahay in ay si lama filaan ah ka tago. Hayso tirada rubuciis anfacaya haddii aad u baahan tahay mid ka mid ah.
Haddii aadan haysan in aad guriga wada tago in rubuciis, isku dayaan in ay la soo gudboonaada ee la soo dhaafay, laakiin ugu yaraan ka fogaadaan muujinaya taariikhda saxda ah halka aad ku nooshahay.
Ka taxaddar leh khamriga si aad u sii dhacdhacaan aad adiga kugu saabsan. Haddii aad u malaynayso in aad cunto ama cabitaan ayaa lagu daray ka dibna ha u baabbi'in.
Hubi in aad leedahay telefoonka ah oo si buuxda u eedeeyay daqiiqo ku filan.
Ixtiraamka in taariikhda laga yaabaa in ay ka walaac isku mid ah iyo ha ku qasbin galay waxba qaban, ma ay joogin raaxo leh.
Waxaad ka heli kartaa True Love Online?
Sidee u leedahay in lagu Date First Amazing